Xukuumadda Somaliland oo si adag uga hadashay warar sheegaya in Hay’adaha ku sugan Hargeysa u wareegayaan Muqdisho | Salaan Media
Home Wararka Xukuumadda Somaliland oo si adag uga hadashay warar sheegaya in Hay’adaha ku...
Xukuumadda Somaliland oo si adag uga hadashay warar sheegaya in Hay’adaha ku sugan Hargeysa u wareegayaan Muqdisho
Hargeysa(SM):- Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta iyo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha dibedda Somaliland, ayaa si isku mid ah u beeniyey warar sheegaya inay Hay’adaha Qaramada Midoobay ee Hargeysa ku sugani dhaqso uga guuri doonaan, isla markaana u wareegi doonaan magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
“Shalay waxa Somaliland yimi oo innoo yimi Wefti ballaadhan oo ka kooban saddon xubnood, kana socda Qaramada Midoobay. Weftigaa waannu kulannay aniga, waxaanay Weftigaasi yidhaahdeen waxaannu u soconnaa oo ay ujeeddadayadu tahay xog-waraysi iyo xog-urursi ku saabsan wax ka beddel lagu samaynayo Xafiiskii la odhan jiray UNPOS ee siyaasadda u qaabbilsanaa Soomaaliya ee Mahiga madaxda ka ahaan jiray, oo markii hore-na xaruntiisu ahayd Nairobi markii dambe-na loo beddelay Xamar.” Sidaa waxa yiri Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo maanta qaar ka mida Warbaahinta ugu warramay Hargeysa.
Waxaanu Wasiir Sacad intaa ku sii laray oo yiri; “Markaa, waxay yidhaahdeen; ‘Maaddaama oo duruuftii ka taagnayd Xamar iyo Koonfur ay wax iska beddeleen, xilkii marka hore loo aasaasay Xafiiska UNPOS uu dhammaaday’. Waayo? Xilkiisu wuxu ahaa nabadayn iyo xilliga kala-guurka Soomaaliya maarayntiisa. Maaddaama oo ay taasi dhammaatay waxa la samaynayaa immika oo lagu beddelayaa Hay’ad kale oo kaa ka sal-ballaadhan, oo waxa la doonayaa in adeegyada Hay’adaha Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ee wixii Soomaaliya la odhan jiray oo dhan meel keliya la isugu keeno maamulkooda.”
“Markaa, Xafiis xarun ah bay ka furanayaan Xamar sidaan hadalkooda ka fahmay, Xafiis kalena Hargeysa ayey ka furanayaan oo ka immika jira ka miisaan culus. Markaan, wax ka weydiiyey saamaaynta uu Somaliland ku yeelan karo is-beddelkaas iyo qaab-dhismeedkaas cusubi hadday tahay tirada Deeqda ama habka iyo hannaanka loo soo mari doono waxaan runtii hadalkooda ka fahmay oo uu ahaa; ‘Waxba iska beddeli maayaan, isbeddelkan loogama jeedo in wax wanaagsanaa wax laga dhimo’. Markaa, wax saamayn ah oo uu innagu yeelanayo oo innagu lid ah oo hadalkoodii iiga soo baxay ma jiro.” ayuu yiri Wasiirka Qorshaynta Somaliland.
Wasiirka Qorshaynta Somaliland Dr. Sacad Cali Shire waxa uu sheegay inaanay jirin illaa hadda wax hay’adaha Somaliland ku sugan ee kuwa Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah mid keliya oo ka mid ah oo Wasaarad ahaan soo gaadhsiisay inay Somaliland ka baxayso ama ay dhimayso shaqaaleheeda iyo mashaariicda ay ka fuliso toona.
Geesta kale, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda arrimaha dibedda iyo Iskaashiga caalamig ah ee Somaliland Mawliid Maxamed Ibraahin ahna Ku-simaha Wasiirka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa, ayaa isaguna arrintaa Hay’adaha iyo Weftiga Qaramada Midoobay ee Hargeysa yimi markii labaad maanta ka hadlay, waxaanu yiri; “Runtii ma jirto Xafiisyo ay (UN-tu) Qaramada Midoobay leedahay oo Somaliland ka guuraya oo Muqdisho degayaa. Runtii Waftigaasi yimidna waannu ka wadahadalnay in si siman oo laba dawladood ah ay noola shaqeeyan Somaliland iyo Soomaaliya, oo wixii xidhiidh ah aannu sidaasi ugu wada-shaqayno, fikirkaasina way nala qaateen, waxaanannu u sheegnay in aannan oggolanaynin in Soomaaliya Xafiis laga furo Somaliland aan laga furin. Markaa arrimahas waannu u caddeynay, Madaxweynaha Somaliland-na hore ayuu ugu caddeyey.”
Wasiir ku-xigeenka oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yiri; “Xafiiska Qaramada Midoobay ee la yidhado UNPOS Somaliland iyo Soomaaliya-na wuu ku yaallay, Waxaanay Weftigu noo sheegeen in marka Bisha June ay gaadho, Xafiiskaasi la baabbi’in doono, oo mid kale oo cusub la furi doono oo loo bixiyo magac kale. Xafiiskaasi wax uu noqon doonaa mid si dhaw dawladaha caalamka ula shaqayn doona.”
“Runtii Weftigaasi waxaannu kala hadalnay oo ay noo sheegeen in Xafiiskaasi uu noqon doono mid ka sarreeya ka immika, oo ka awood badnaan doona oo xidhiidh badan la sameyn doona dawladaha. Markaa, waxay naga codsadeen in aannu wixii talo ah ku soo biirinno iyaga, waxaanay Weftigaasi la kulmeen afar Wasaaradood, gelinkii danbe ee shalay-na waxay la kulmeen Hay’adaha iyo Ururrada aan dawliga ahayn, waxaanay kala hadlayen hawlaha ay qabtaan.” Sidaa ayuu yiri Wasiir Ku-xigeenka arrimaha dibedda Somaliland Mawliid Maxamed Ibraahin.